तपाईको पिसाबमा खराबी छ ? उसोभए लाग्नसक्छ पाठेघरको क्यान्सर, यी हुन् सुरुवाती लक्षण ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / तपाईको पिसाबमा खराबी छ ? उसोभए लाग्नसक्छ पाठेघरको क्यान्सर, यी हुन् सुरुवाती लक्षण !
तपाईको पिसाबमा खराबी छ ? उसोभए लाग्नसक्छ पाठेघरको क्यान्सर, यी हुन् सुरुवाती लक्षण !
admin August 8, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 309 Views
काठमाडौँ । छातीको क्यान्सपछि विश्वमा सबैभन्दा बढी महिलाहरु पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट पीडित हुने गरेका छन् । पाठेघरको मुखको क्यान्सर गर्भाशयको तल्लो भागमा हुनेगर्छ । अर्थात गर्भाशय र योनीलाई जोड्ने भागमा । यस प्रकारको क्यान्सरको सुरुवात महिलामा ३५-४० बर्षको उमेरपछि हुन्छ । विशेषगरी महिलाको मासिक स्राव अनियमित हुन्छ र योनीबाट धेरै रगत स्राव हुन्छ ।
सामान्यत पाठेघरको मुखको क्यान्सर ३५ देखि ४० बर्षको उमेरपछि हुनेगर्छ । यद्यपि यसको संकेतबाट रोग पहिचान गर्न सकिन्छ । यदि शारीरिक सम्बन्ध र रजनोवृत्तिपछि पनि धेरै रक्तश्राब भयो, प्रजनन अंगमा दुखाई महसुस भयो भने यो पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लक्षण हो । यस्तो स्थितिमा तपाईंले तुरुन्तै चिकित्सकको परामर्श लिन आवश्यक छ ।
मासिक धर्ममा सामान्यतः महिलाको कोखमा दुखाई अनुभव हुँदैन । तर, अचानक हल्का वा तिब्र दुखाई महसुस हुन थालेमा त्यो पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लक्षण हुनसक्छ । यस्तो स्थितिमा तपाईंले तुरुन्तै चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ ।
यदि पाठेघरको लक्षणलाई नजर अन्दाज गरियो भने यो क्यान्सर यतिसम्म बढ्न पुग्छ कि त्यसले पिसाबको थैलीसम्म पुग्न सक्छ । यसले गर्दा पिसाब फेर्दा कठिन हुन्छ । यस्तो स्थितिमा पनि तपाईंले तुरुन्तै चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ ।
मासिक स्रावका क्रमममा वा सम्बन्ध बनाइरहेको बेला रक्तश्राव हुनु वा अचानक गर्भाशयमा जलन हुनु पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लक्षण हो । यस्तो लक्षणलाई नजरअन्दाज नगरौं ।
Previous २६ करोड रुपैयाँको औषधि असफल, उपचारपछि पनि ११ महिनाकी बालिकाको मृत्यु
Next विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या २० करोड नाघ्यो